के होला केकीको ? - मनोरञ्जन - नेपाल
स्वरबाट फिल्ममा फड्को मारेकी केकी अधिकारी अभिनीत डेढ दर्जन फिल्मले लगानी उठाएका छैनन् । त्यही कोटिमा परे, राज्जारानी र हुर्रे । केकीको मुख्य भूमिका रहेका यी दुवै फिल्मले न निर्मातालाई खुसी बनाए, न त दर्शकलाई । भलै भटाभट दुई फिल्म फ्लप हुनु केकीका लागि नौलो कुरा होइन । भनुँ न, बानी परिसकेको छ । तर, यसपटकको मामला पहिलेभन्दा भिन्न छ । कारण, उनको निर्माणमा बनेको फिल्म कोहलपुर एक्सप्रेस प्रदर्शनको संघारमा छ । अघिल्ला फिल्मको व्यापार सुखद नहुँदा कोहलपुर एक्सप्रेसलाई धक्का लाग्नेमा शंका छैन । सायद यही कारण हुनुपर्छ, केकी दिलोज्यान दिएर प्रचार–प्रसारमा लागेकी छन् । तर, केकीको लगानी र साख बच्ला त ? १४ वैशाखमा कोहलपुर एक्सप्रेस प्रदर्शन भएपछि नै थाहा हुनेछ ।